काँग्रेसको सवारी ‘सरर’ कि ‘डिस्को र भाङ्डा’ ? « Image Khabar
काँग्रेसको सवारी ‘सरर’ कि ‘डिस्को र भाङ्डा’ ?
११ पुष २०७८, आईतवार २०:४४
काठमाडौं। वर्तमान काँग्रेस महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा चर्चित अभिनेता दीपकराज गिरी छोटो तथा मिठो शब्दमा यसो भन्छन् –‘काँग्रेस चुनावमा –२ ‘प’ को दरो भिडन्त । ‘पावर’ र ‘परिवर्तन’ । दुवै बराबर जस्तै रहेछन् । अब पावरले जित्ला वा परिवर्तनले ?’
उनले यसो भनिरहँदा काँग्रेस महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको पूरै प्यानलले बहुमत जितेको छ । केही पदहरूमा युवाहरूले समेत जितेका छन् तर यसो भनिरहँदा युवा र परिवर्तनका पक्षधरहरूको ‘प्यारलाल’ लडाइँ बँचाएर लैजान सकेभने मात्र काँग्रेसले यो आउँदो पाँच वर्षमा महामन्त्री गगन थापाले भनेजस्तो काँग्रेसलाई सुनिने, बुझिने र पढिने पार्टीे बनाउन सजिलो हुन्छ । अब त्यो कार्यभार काँग्रेसजनकै काँधमै आएको छ । हामी बाहिरफेर रहेर शुभेच्छा दिनेहरूले त सल्लाह, सुझाव र टिप्पणी मात्र गर्ने हो ।
सन्दर्भ फेरि पनि काँग्रेस महाधिवेशन कै । पोखराबाट विश्लेषक विश्व सिग्देल लेख्छन्– ‘यही महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदा राजधानी–तराई द्रूतमार्ग बन्ने रकमभन्दा बढी खर्च भयो भन्ने सुनिन्छ । हाम्रो पालामा सुन्धाराका होटल र झोँछे तिरका सेकुवा पसलमा चहलपहल बढी हुन्थ्यो, अहिले पाँचतारे होटल र रेष्टुरा बार खचाखच भए भन्ने सुन्थेँ । कलबलगुडीमा खुला आकासमा बोराले तगेको डनसामाथि सुतेको ज्यान यहीँ छ । देशलाई अझै कति कंगाल बनाउने हो र अर्को अधिवेशन ? अमेरिकाले बनाई दिएको विधानमा टेकेर जापान कोरियाले अमेरिकालाई जिते । संविधान सभाले बनाएको कबाडी संविधानजस्तै बनाउने विचार हो ज्वाइँ साहेब ?’ उनले यसो भनेर नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गरेका हुन् ।
‘नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ तर कुनै नीतिगत बहस नभएकोले नुन विनाको तरकारीजस्तो भएको छ । नीतिगत महाधिवेशनको विषयमा नेकाँले गम्भीर रूपमा छलफल प्रारम्भ गरोस् ।’ – नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष तथा काँग्रेस शुभेच्छुक मोहन ज्ञवाली आफ्नो तीतो पोख्छन् । उनी कोइराला प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठेका थिए तर पराजय भोगे । बास्तवमा काँग्रेसले यो महाधिवेशनमा नीतिगत छलफल गराउने, चर्चा र बहस गर्ने आवश्यकता नै देखेन ।‘प्रदेशमा सांसद पाँच सय ५० र मन्त्री एक सय ६३ तब न सङ्घीयता !’ नेपाल शिक्षक संघकै पूर्व अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराई आफ्नो वालमा लेख्छन् ।
‘जथाभावी मन्त्रालय टुक्र्याएर संघीयतालाई बद्नाम गर्ने काम मुख्यमन्त्रीहरूबाट हुँदैछ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू ! अविलम्ब यस्ता विसंगत हर्कत रोक्नुस् । मन्त्री फुर्को जोड्दैमा वैतरणी तरिने हैन, किन यति धेरै मरिहत्ते गर्या होलान् मन्त्री हुन मान्छेले व्यवस्था बद्नाम हुने गरी ? ओली प्रतिगमन एउटा फेज थियो, त्यसले मात्रै गठबन्धन सधैँ पानी माथिको ओभानो भइरहँदैन । जनभावना माथिको खेलवाड महँगो पर्ला !’ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक डम्मर खतिवडा आफ्नो विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दै भन्छन् ।
‘सके संसद विघटन गर, नसके अवरुद्ध गर । कुनै विधेयक संसदमा छलफल पास हुन नदेऊ । अध्यादेशले शासन गर, अध्यादेशले शासन गर्न बाध्य पार । अत्यावश्यक ऐेन कानुन पनि नबनाऊ, बन्न नदेऊ । एम्सिसी ४ वर्षदेखि रोकिराख, देशको विश्वासयिनता विश्वसामु समाप्त पार । कुकुर–बिरालोजस्तो सधैँ झगडा गर । जनहितका विषयमा कहिल्यै बहस संसदमा नगर । अनि सबै मिलेर एक स्वरले उच्च आवाजमा भन –संसदीय लोकतन्त्र जिन्दावाद ! संसारकै उत्कृष्ट संविधान र व्यवस्था –अमर रहोस् ।’ जसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा अझ अगाडि भन्छन् ।
हिन्दीमा एउटा भनाइ छ –‘दूर, जितनी भी दूर तुम देख सकते हो, हमेशा याद रखना, उसके आगे भी मंजिलेँ हैँ ।’ यो भनाइ यतिखेर लोकतन्त्रसँग तादाम्यता राखेर हेर्न सकिन्छ ।
‘अहिलेको लोकतन्त्र गरिब, मिहिनेतकश र श्रमिकका झुपडीमा पुगिसकेको छैन । यो पुग्नका लागि कम्तिमा पनि दसकको यात्रा लोकतन्त्रले तय गर्नु पर्छ । अहिले देखिएका घटना र परिघटनाहरू मात्र बाढी आएका बेलामा नदीमा बगाएर ल्याएका काठ, कसिङ्गर र घैमल हुन् । यो स्थिति सुध्रिनमा धेरै समय लाग्छ । नदीले आफ्नो फोहर आफैँ शुद्ध गरेझैँ लोकतन्त्रले आफ्नो गति आफैँ लिन्छ । धेरैजसो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यही अवधारणा राखेर ‘वेट एन्ड सी’ को अवधारणाले हेरिरहनु भएको छ ।’ यतिखेर जापानको क्योटो युनिभर्सिर्टीमा दक्षिण एसियाको अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गराइरहनु भएका भिजिटिङ् प्रोफेसर दीपेशकुमार घिमिरे सगौरव बताउनु हुन्छ ।
‘काँग्रेस बाँच्ने भो अब, ढुक्क । अन्यथा नालायक ‘कपूत’ हरूले रछ्यान नै बनाउन लागिसकेका थिए पार्टीहरूलाई ।’ सम्पादक तथा चर्चित साहित्यकार विमल भौकाजीले फेसबुकमै भनेका छन् ।
‘डाक्टर भन्या डाक्टर नै हुन् । महामन्त्रीमा नबिकेको झोँकमा जाबो रक्षामन्त्री ? नैतिकता र राजीनामाको भेट यता भयो जे भए पनि ? पार्टीभित्र नपत्याइने मान्छेले देशमा मन्त्री हुन सुहाउन्न । ठिक गर्नु भयो डाक्टर रिजाल ?’ –काँग्रेस महामन्त्रीमा पराजय भोगेका मीनेन्द्र रिजालले चुनावी परिणामलाई तत्काल स्वीकारेर रक्षा मन्त्रीबाट दिएको राजीनामा बारे युवा लेखक सञ्जीव कार्की भन्छन् ।
अर्का आर्थिक युवा पत्रकार निरोशकुमार थापा भन्छन् –‘न रुपान्तरण, न पुस्तान्तरण, न हस्तान्तरण ओन्ली नवीकरण ।’ यसमा श्याम व्यङ्ग्यको भाव निहीत छ ।
‘रूखिएको बाँच्छोले चैँ हिँड्न जान्दैनन् । उफ्रेको मात्र हुन भन्ने प्रमाणित गर्यो । अब गाईको बाच्छोले चैँ उफ्रेको हैन हिँड्नै जान्दछु भनी आफूलाई प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ, आखिर समय बलवान् छ । हेर्ने हामी छँदै छौं ।’ राप्रपाबाट नव निर्वाचित अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र लिङ्देन र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको काँग्रेस महाधिवेशनमा भएको दोहोरीलाई चित्रण गर्ने क्रममा युवा कानुन व्यवसायी रामहरि के.सी. भन्छन् ।
‘थोत्रो कोट लगाऊ, थोत्रै किताब पढ, सन्दर्भ एमाले अधिवेशन’ –लेखक तथा शिक्षक सरोज बराल भन्छन् ।
‘नेता त दर्शन र स्पाति दृष्टिकोणले भइन्छ न कि दलालीले । दिसापिसाब त्यागले वर्तमानमा बाँचिन्छ इतिहासमा होइन ।’ एक प्रजातन्त्रवादी युवा आफ्नो तीतो पोख्छन् ।
‘सबै एक ठाउँमा उभिएर शेखरलाई एक्लाउनुको पनि गहिरो राजनीतिक अर्थ छ । मान्नुस् यो महाधिवेशनले शेखर कोइरालालाई खास नेता बनायो । दल भित्रको एउटा सशक्त समूहको अगुवा स्थापित गर्‍यो । मैले बुझेको यही हो ।’ काँग्रेस महाधिवेशनको रहलपहल विचारको विट मार्दै अर्का चर्चित युवा पत्रकार नारायण अमृत आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा भन्छन् ।
अब जनता जनार्दनले हेर्न बाँकी छ –काँग्रेसका यी आगामी पाँच वर्षहरू फाष्ट ट्र्याकमा हिँडेको सवारीझैँ ‘सरररर’ हुन्छ कि नेपाली दूर्गम गाउँवस्तीमा हिँडेको ट्रयाक्टरझैँ ‘डिस्को र भाङ्डा’ गर्दै नाच्ने शैली । समयले परख गरेर जवाफ आफैँ स्वतःस्फूर्त रुपमा दिनेछ ।